Mozilla, Google, Apple uye Microsoft vanobatana nemauto kuenzanisa zvinowedzera | Kubva kuLinux
Mozilla, Google, Apple uye Microsoft vanobatana nemauto kuenzanisa zvinowedzerwa
Iyo W3C yakazivisa Mazuva mashoma apfuura kuumbwa kweboka renharaunda rinonzi "WebExtensions" (WECG) iro rine basa rakanyanyaini ndinoshanda pamwe chete nevapi vebrowser uye mamwe mapato anofarira kusimudzira chikuva chekuvandudza plugin Yakajairika browser maererano neWebExtensions API.
Iri boka rinoshanda rinosanganisira vamiriri kubva kuGoogle, Mozilla, Apple uye Microsoft uye zvakatemwa zvakagadzirwa neboka rinoshanda chinangwa chekugadzirisa kugadzirwa kwemapulagini iyo inoshanda mumabhurawuza akasiyana.
W3C inotaura kuti inoronga kuzadzisa ichi chinangwa nekutsanangudza iyo yakazara modhiyo uye yakajairika musimboti mashandiro, API uye masimba system, pamusoro pekuti iro boka rinoshanda richa tsanangudza chivakwa chinowirirana chekuvandudza mashandiro, kusimbisa chengetedzo uye kupa dziviriro kubva kushungurudzwa.
Kana uchigadzira zvirevo, zvinokurudzirwa kutevedzera zviga zvinoshandiswa neW3C TAG (Technical Architecture Boka), senge yekushandisa mushandisi, kusabatana, chengetedzo, kuvanzika, kutakurika, kurerukirwa kwekuchengetedza, uye hunhu hunofungidzirwa.
La WECG webhusaiti inotaura kuti chinangwa cheboka kutsanangura yakajairika API musimboti, modhi, uye mvumo yekuwedzeredzwa webhu browser, achiti:
Nekutsanangura WebExtensions APIs, mashandiro, uye mvumo, tinogona kuzviita kuti zvive nyore kune vanogadzira ekuvandudza kunatsiridza ruzivo rwekupedzisira-mushandisi, uku tichivaendesa kumaAPIs anovandudza mashandiro uye kudzivirira kushungurudzwa.
Parizvino boka rakagadzira yakazvitsaurira GitHub repository uye yakaisa pamwechete a gungano remunharaunda mukugadzirira iro basa riripo iro rinotsanangurwa se:
Tichishandisa iyo iripo yekuwedzera modhi uye maAPI anotsigirwa neChannel, Microsoft Edge, Firefox, uye Safari sehwaro, isu tinotanga kushanda pane chirevo. Chinangwa chedu ndechekutarisa zvakafanana, kuunza mashandiro padyo pamwe, uye kuronga nzira yekushanduka mune ramangwana.
Plugin yekuvandudza APIs uye mamodheru akamboshandiswa muChannel, Microsoft Edge, Firefox, uye Safari zvichashandiswa sehwaro hweyakagadzirwa mafekitori. Boka rinoshanda richaedza kutsvaga zvakajairika kune ese mabhurawuza ekugadzira plugins, kuunza mashandiro padyo pamwe, uye kutsanangura nzira dzekugona kusimukira.
Mutsamba yebasa, ivo vanotaura zvinotevera mazano ekugadzira:
Mushandisi-centric: browser yekuwedzera inobvumira vashandisi kuti vashandure yavo yewebhu kubhurawuza ruzivo zvichibva pane zvavanofarira uye zvavanoda.
Kubatana: chengetedza uye uvandudze kuenderana nezviripo zviripo uye zvakakurumbira kuwedzera maAPIs. Izvi zvinobvumidza vanogadzira kuti varege kuzonyorazve zvinyorwa zvavo kuti vashande mumabhurawuza akasiyana, izvo zvinogona kukanganisa kukanganisa.
Performance: Bvumira vanogadzira kuti vanyore kuwedzeredza izvo zvisina kukanganisa maitiro kana mashandisiro emagetsi emapeji ewebhu kana browser.
Chengetedzo: Paunenge uchisarudza kuti ndeapi ekuwedzera ekushandisa, vashandisi havafanirwe kukanganisa kuita nekuchengetedza. Iine matsva ekuwedzera APIs, shanduko ichaitwa kune iyo modhi.
Privacy: Saizvozvowo, vashandisi havafanirwe kukanganisa maitiro uye zvakavanzika. Sezvo pfungwa huru ichave yekuti mabhurawuza ekuwedzeredza anovandudza ruzivo rwevashandisi uku ichida hushoma hunodiwa kuwana kune yemushandisi dhatabhesi rekudzora kana kubvisa kutengeserana-uko vanogumisa vashandisi vanofanira kuita pakati pekushanda pamwe nekuvanzika.
Kutakura: Zvinofanira kunge zviri nyore kune vanogadzira kuendesa ekuwedzera kubva kune imwe bhurawuza kuenda kune imwe, uye kune mabhurawuza ekutsigira kuwedzeredzwa pane akasiyana madhijitari uye masisitimu anoshanda.
Kuchengetedza: Nekurerutsa maAPI, izvi zvinofanirwa kubvumidza iro rakakura boka revagadziri kuti vagadzire kuwedzeredza uye kuti zviite nyore kwavari kuchengetedza izvo zvavanogadzira.
Kuzvionera: vabatsiri vebrowser vanofanirwa kupa mashandiro chaiwo kubrowser yako uye vanofanirwa zvakare kuve nemukana wekuyedza maficha matsva
W3C yataura zvakajeka izvozvo haina kuitirwa kuraira chaizvo izvo vanogadzira vanogona uye vasingakwanise kugadzira nekuwedzera. Kana ivo havangatsanangure, kumisikidza kana kuratidzira kwakatenderedza kusaina kana kuendeswa kwekuwedzeredzwa. Ivo vanongoda kukurudzira hunyanzvi nepo vachichengetedza kuvanzika kwevashandisi uye chengetedzo nenzira yakafanana kune iyo bhodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Mozilla, Google, Apple uye Microsoft vanobatana nemauto kuenzanisa zvinowedzerwa
muchidimbu: hukuru-hukuru monopoly
OpenProject: Nyowani vhezheni 11.3.1 yeProjekti Management Software